Akhriso:-Maxaa ka jira in ay Jubbaland ay hor istaagtey kulan dhexmari lahaa wakiilka IGAD iyo qaar kamid ah odayaasha dhaqanka? |
Akhriso:-Maxaa ka jira in ay Jubbaland ay hor istaagtey kulan dhexmari lahaa wakiilka IGAD iyo qaar kamid ah odayaasha dhaqanka?
Shaley waxaa baraha bulshada lagu baahiyey sawirro ay ka muuqdaan odayaal oo ku sugnaa hotelka Makka ee magaalada Kismaayo.
Odayaashaas ayaa sida la baahiyey la sheegay in Jubbaland ay is hor istaagtey kulankii ay la yeelan lahaayeen wakiilka IGAD oo maalmahan Kismaayo ku sugan.
Wakiilka IGAD ee Soomaaliya Dr.Maxamed Guyow oo maalmahan ku sugnaa Kismaayo kulamana la qaadanayey Gudiga doorashada, Musharaxiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa aqbaley codsi ka yimid labo kamid ah saxiixayaasha xildhibaanada Jubbaland oo ahaa inay la kulmaan wakiilka IGAD.
Labada Ugaas oo kala ah Ugaas Maxamed Xaashi iyo Ugaas Qorane ayaa codsigoodii waxaa aqbaley Wakiilka IGAD sidaasna kulanka loogu qaban qaabiyey ayadoo hal shuruud lagaga dhigay inuusan hal qof oo kale soo raacin.
Labadii Ugaas ayaa soo kiciyey dad ay ku sheegeen odayaal dhaqameed taas oo aan shuruudii lagu xiray kulankooda aan kujirin maadaama uusan jirin oday dhaqameed kale oo kamid ah saxiixayaasha Jubbaland oo aan labadooda ahayn oo ka maqnaa kulankii hore ay IGAD la qaadatey saxiixayaasha Jubbaland.
Sidaas darteed wakiilka IGAD u fadhiya Soomaaliya ayaa gabi ahaanba diiday kulankaas maadaama ay odayaashu balantii ka baxeen.
Maanta oo Khamiis ah 8/8/2019 ayuu wakiilka IGAD la kulmayaa labadii saxiixayaal maadaama ay kulankii hore ka maqnaayeen kii shaleyna uu baaqdey.